Tababarka ku saabsan aqoon korarsi Xeer ilaaliyasha, Garsoorayash iyo Booliska | Puntland Attorney General Office
Tababarka ku saabsan aqoon korarsi Xeer ilaaliyasha, Garsoorayash iyo Booliska
2-07-2018 ayaa Tababar ugu furmay Xeer ilaaliyasha ,garsoorayash iyo Booliska.
Waxaana Tababarkaas furay ku xigeenka Xeer ilaaliye Guud Dr: Moxamed Xareed Faarax iyo sarkaal ka tirsan hay`ada EU-CAP Tababarkaas oo soconayay lix maalmood .
Waxaana si wada jir ah u qabtay Xafiiska xeer ilaaalinta guud iyo wasaaradda cadaaladda oo iskaashanaya ayaa tababar uqabatay Xeerilaaliyayasha, garsoorayaasha iyo Booliska kuwaas sidoo kale tababarkaas waxaa kasaacidayay xafiiska xeer ilaalinta iyo wasaradda cadaaladda hay`adda EU-CAP.
Tababarkaaan casharada laga bixinayay waxay kala ahaayeen, xeerka ciqaabta, xeerka habka ciqaabta, xeerka madaniga, xeera habka madaniga, habka barista kiisaska iyo xiriirka garsoorka iyo booliska dhex mara, xuquuqul insaaanka, iyo xeerka anshaxa garsoorka.
Lixda maalmood uu socday tababarku, wuxuu ahaa mid kor loogu qaadayo tayada iyo aqoonta garsoorka iyo xeer ilaalinta iyo booliska, oo kala ah kuwo had iyo jeer shaqadoodu isku xirantahy lana rabo in ay si dhaw oo hufan uwada shaqeeyan, tababarkaas waxaa uu ahaa tababr aad looga faa`iiday casharo kala duwana lagu bixiyay.
8-07-2018 ayaa lasoo gabagabeeyay tababarka waxaana so xiray Xeeer ilaaliye ku xigeenka Puntland Mohamed Hareed Faarah, waxaana uu umahadceliyay hay`ada EU-CAP kulana dardaarmay garsoorayasha iyo booliska inay casharada ay qaateen ku dhaqmaan, sidoo kale sarkaal ka socday EU-CAP ayaa umahadceliyay xafiiska xeer ilaalinta soo abaabulkiisi tababarkaas, waxaana uu balan qaaday inay sii wadayaan tababarada ay ku taageerayaan garsoorka iyo booliska.